Telecommuting နှင့်အတူခေါင်းဆောင်မှုစမ်းသပ်ခြင်း | Martech Zone
ကြာသပတေးနေ့, ဇွန်လ 26, 2008 ကြာသပတေးနေ့, ဒီဇင်ဘာလ 15, 2016 Douglas Karr
ဒီနေ့ညနေမှာပဲ Pat Coyle နဲ့တခြားသူတွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တယ် ဆေးရုံ သေးငယ်တဲ့ Indiana ရုံးချုပ်ရှိ Pat's Open House မှာ။
ကျွန်တော်ဆွေးနွေးခဲ့ဖူးတာကတော့ခေါင်းဆောင်မှုနည်းပြနှင့်လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်အထူးကျွမ်းကျင်သူ Lalita Amos နှင့် Purdue ကျောင်းသားဟောင်းများနှင့်တွဲဖက်ပါမောက္ခမှာ NYU။ ငါစကားပြောသောအခါ Lalita နှင့်အတူဇာတ်စင်မျှဝေဖို့အပျြောအပါးရှိခဲ့ပါတယ် ကုမ္ပဏီများအတွင်းလူမှုကွန်ယက်များအသုံးပြုခြင်းအကြောင်း IABC.
Lalita ကနည်းပညာသည်မန်နေဂျာများကိုပိုမိုကောင်းမွန်သောခေါင်းဆောင်များဖြစ်လာစေရန်တွန်းအားပေးနေသည်ဟုမှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။ တယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်မှု၏ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတစ်ခုမှာမန်နေဂျာများသည်မိုက်ခရိုစီမံခန့်ခွဲမှုများကိုမပြုလုပ်နိုင်၊ သူတို့၏ရုပ်သွင်ကိုကြည့်။ ဆုံးဖြတ်ခြင်းသို့မဟုတ်မှားယွင်းသောစွဲမှတ်မှုဖြစ်စေရန်ရုံးအတင်းအဖျင်းများကိုနားမထောင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းသည်မန်နေဂျာများအားထိရောက်စွာဆက်သွယ်ပြောဆိုရန်၊ အချိန်ဇယားများကိုစနစ်တကျစီမံရန်၊ သူတို့၏ ၀ န်ထမ်းများကိုယုံကြည်ရန်၊ ထိရောက်သောစွမ်းဆောင်ရည်အစီအစဉ်များနှင့်ရည်မှန်းချက်များချမှတ်ရန်နှင့်ထိန်းသိမ်းရန်အပြင်သူတို့၏ ၀ န်ထမ်းများ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုင်းတာရန်လိုအပ်သည်။ အမှန်တကယ် စွမ်းဆောင်ရည်!
ခိုင်မာသောဆက်သွယ်ရေးပရိုဂရမ်တစ်ခုကိုပြen္ဌာန်းခြင်းထက်အားကြီးသောခေါင်းဆောင်အားအစွန်းထက်ကျော်လွန်စေနိုင်သည့်အရာမရှိချေ။ ၎င်းသည်အခြားစိန်ခေါ်မှုများစွာကိုဖြစ်ပေါ်စေသော်လည်းကောင်းမွန်သောခေါင်းဆောင်တစ် ဦး သည် ၀ န်ထမ်းများ၏ကျေနပ်မှုနှင့်ထိန်းသိမ်းမှုကိုတိုးတက်စေကာမူထိုကဲ့သို့သောပရိုဂရမ်တစ်ခုမှတဆင့်မယုံကြည်နိုင်လောက်သောကုန်ထုတ်စွမ်းအားကိုမောင်းနှင်နိုင်သည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ဓာတ်ငွေ့စျေးနှုန်းက ၄ ဒေါ်လာအထက်ရှိပြီး၊ ငွေကြေးမက်လုံးတစ်ခုလည်းရှိပါတယ်။
Tags: Lalita အာမုတ်ခေါင်းဆောင်မှုဆက်သွယ်ရေးwfhအိမ်မှအလုပ်လုပ်သည်
ဂူဂဲလ်ဆိုက်ကို SERP တွင်ရှာပါ။
27:2008 pm မှာဇွန် 7, 47
ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့်ပတ် ၀ န်းကျင်နှင့်ကျန်းမာရေး ၀ န်ထမ်းများ၏စိတ်ကျန်းမာရေးကိုသက်သေပြနိုင်သော်လည်းတယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်မှုကိုလက်ခံရန်တွန့်ဆုတ်နေဆဲဖြစ်သည်။ ခေါင်းဆောင်များနှင့်မန်နေဂျာများအားသူတို့၏ဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာလုပ်သားအင်အားကိုမည်သို့စီမံခန့်ခွဲရမည်ကိုပိုမိုလေ့ကျင့်သင်ကြားရန်လိုအပ်သည်။
27:2008 pm မှာဇွန် 8, 55
ငါပိုပြီးသဘောတူနိုင်ဘူး! Lalita နဲ့ဒီအကြောင်းအရာအလွန်ပြောပြီးတယ်လီကွန်းဆက်သွယ်ရေး၏အားသာချက်များ၊ နမူနာမူဝါဒများ၊ ဥပဒေရေးရာအချက်အလက်များနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းအချက်အလက်စာရွက်စာတမ်းတစ်ခုထုတ်ဝေခြင်းသည်အလွန်စာရွက်စာတမ်းနှင့်ထိုက်တန်သောဖြစ်နိုင်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်
27:2008 pm မှာဇွန် 9, 45
ဒီဟာကိုမသေချာဘူး ကျွန်ုပ်၏နောက်ဆုံးအလုပ်တွင်ကျွန်ုပ်သည်ရုံး၌ရှိခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်၏သူဌေးကဆက်သွယ်ရေးလုပ်သည်။ ကြောက်စရာကောင်းခဲ့တယ်။ သူမမှာဘာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာငါသိတယ်၊ ငါဘာလုပ်နေလဲဆိုတာတိတိကျကျတော့မဟုတ်ဘူး။ ငါသူမအဝေးကနေမိုက်ခရိုစီမံခန့်ခွဲဖို့ကြိုးစားနေခဲ့သည်ထင်, ဒါကြောင့်ငါ့ကိုအခွံမာသီးမောင်း။ ငါတကယ်အလုပ်လုပ်နေတာထက်ငါ့အလုပ်လုပ်နေတယ်ဆိုတာသက်သေပြဖို့ကြိုးစားနေအချိန်ပိုမိုဖြုန်းသောအချက်သို့ရောက်သောအခါ, ငါဆေးလိပ်ဖြတ်။
မTheဲ Theriault-Thompson က
27:2008 pm မှာဇွန် 10, 24
အရိုအသေကင်းခြင်းမရှိဟုဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပါ၊ သို့သော်၎င်းသည်အစောပိုင်းအချက်ကိုအမှန်တကယ်ထောက်ခံသည်။ ဤဖွဲ့စည်းပုံသည်ဆင်းရဲသောမန်နေဂျာ၏အားနည်းချက်ကိုအမှန်တကယ်ဖော်ပြသည်ဟုဆိုနိုင်သည်။ ကံမကောင်းစွာပဲဒီဇာတ်လမ်းမှာမင်းဟာတိုတောင်းတဲ့အဆုံးကိုရခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် ၀ န်ထမ်းတွေနဲ့အထူးသဖြင့်မန်နေဂျာရဲ့အပြန်အလှန်ဆက်ဆံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတပ်တွေအကြားမငြိမ်မသက်ဖြစ်ခဲ့ရင်၊ အထက်အရာရှိကထိုမန်နေဂျာရဲ့ပြissuesနာတွေကိုဖွင့်ပေးလိမ့်မယ်။ အဆိုပါအစွန်း "ငါအသုံးပြုခဲ့သည်ယုံကြည်သောထားသောစာပိုဒ်တိုများဖြစ်ပါတယ်။